EXMO.RU - Free AirDrops - обзор, данные, статистика, информация в Telegram.
Хотите заказать рекламу на канале телеграмма Free AirDrops? Просто оставьте заявку и ожидайте предложения!
Заказать рекламу у Free AirDrops
Посты Free AirDrops
Facebook နဲ့ Metaverse နာမည်ပြောင်းလဲခြင်း
To Read The Article click here https://cb.run/aOk5 cb.run CB.click - Advanced URL Shortener URL Shortner tool from CryptoTab. This tool will help you to turnalong and complicated link intoashort one and get ...
https://cb.run/aOk5 cb.run CB.click - Advanced URL Shortener URL Shortner tool from CryptoTab. This tool will help you to turnalong and complicated link intoashort one and get complete statistics with advanced features
#version 4.1.79ပါမတွေ့သေးလို့ဆက်လုပ်မရသူတေအဆင်ပြေအောင်ပါ #‌နောကျဆုံးဗားရှငျး‌လေးပွနျဖွညျ့‌ပေးထားပါတယျ
Referနည်း‌ေနလို့ပါ မလုပ်ရသေးရင်စုထားကျပါတော့ မသိတာရှိရင်cbလာမေးပါဗျ သိသလောက်ပြန်ပြောပြပါမယ်
အနာဂတ်အတွက် Bitcoin စုပါ။
လက်ရှိ Bitcoin ပေါက်စျေး မြန်မာငွေ သိန်း 1000 နီးပါး စျေးတက်နေပြီမို့ မလုပ်ရသေးရင် လုပ်ထားပါ။
အောက်ကအဆင့်လေးတွေအတိုင်း သေချာလိုက်လုပ်ပေးပါ။ 👇👇👇
၁) Play store ကနေ ဒေါင်းမယ်ဆို ဝယ်ရတဲ့ app ဖြစ်လို့ ပိုက်ဆံမကုန်အောင် အောက်လင့်ခ်ကနေအရင် ဝင်ဒေါင်းပါ။ အရင်...
ကျွန်​တော်က​တော့ 1300ကျော်ရ​နေပြီဗျာ။ CryptoTab browser လေးပါ BTC mine လုပ်ပေးပါတယ် 3နာရီတစ်ခါဝင်နှိပ်ပေးရပါတယ် 2ယောက် invite နိုင်ရင် speed 2ဆနဲ့ mine လုပ်ပါတယ်ဗျာ 😁 App လေးကိုဒီကဝင် download ‌ပေးပါနော် play store ကဆိုပိုက်ဆံ‌ပေးပြီး download ရလို့ပါ
17 Окт 17:38
ကံကောင်းလားမကောင်းလား ဒီမှာသွားစမ်းကြည့်ကြဗျိူ့😬😬ဂိမ်းတွေဆော့ရင် coin နဲ့ ကံစမ်းမဲလက်မှတ်တွေရမယ် dollar 1000 က နေ 0.01 dollar အထိ ကဲစမ်းမဲဖောက်ပေးနေတယ် ကဲစမ်းမဲမပေါက်လဲ coinနဲ့ USD နဲ့လဲ ပီး coinbase ကထုတ်
16 Окт 12:29
https://earnmoney-share.app.link/rpxQYn1B2jb https://farm-simulator.app.link/TxshFL6D2jb https://mathematix.app.link/nVGij7bA1jb https://dynamix-share.app.link/cnbdLfbC2jb https://ressty-simulator.app.link/uVZzB7iVlkb https://givvy-share.app.link/yWPLARMz1j...
✅ Your Referral =0Users
✅ Per Referral : 0.00000025 ETH - Share Your referral link to your Friends ; earn unlimited ETH
🔗 Referral Link ⬇️ https://t.me/EthereumFastPay_bot?start=Bot7392987
⚠️ Note Fake empty or spam users are deleted after check...
14 Окт 06:41
💙 Invite Refferals
Share Your Refferal Link To Your Friends ; Earn Extra Free Doge On Each Joined On Your Refferal Link.
🎁 Reward Free 0.002 Doge Per Refferal
💈 Total Refferals: 14 Users
Refferal Link: https://t.me/TwitterFreeDogeBot?start=user...
14 Окт 06:31
🔆 Your Referral Information
⛅️ Your Refer link: https://t.me/SHIBA_CoinbaseBot?start=2038294510
▪️Your Total Referrals:0Users
🌺 Per Referral 800 SHIB - Share Your referral link to your Friends ; earn unlimited SHIB
⚠️ Note: Fake, empty or spa...
14 Окт 06:12
⛅️ Your Refer link: https://t.me/SHIB_Coinbase_V4Bot?start=2038294510
▪️Your Total Referrals:7Users
🌺 Per Referral 200 SHIB - Share Your referral link to your Friends ; earn unlimited SHIB
⚠️ Note: Fake, empty or s...
𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐓𝐚𝐛 𝐁𝐫𝐨𝐬𝐰𝐞 𝐏𝐫𝐨 နဲ့ 𝐁𝐢𝐭𝐢𝐜𝐨𝐧 ( 𝐁𝐓𝐂 ) 𝐅𝐫𝐞𝐞 ရှာကြမယ်
𝐂𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐓𝐚𝐛 က 𝐅𝐫𝐢 𝟐ယောက် 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐞 တာနဲ့ 𝟏လ 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝟐𝐱 𝐏𝐥𝐚𝐧နဲ့ 𝐌𝐢𝐧𝐞 လို့ရ‌နေပါပြီ။
𝟐𝐱 (𝟐ဆ) ဆိုတော့ 𝐁𝐓𝐂 ပိုရတာပေါ့ မလုပ်ထားရသေးသူများ ဝင်ကူပေးပါအုံး။
𝐏𝐥𝐚𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐫𝐞မှာ 𝐦𝐦𝐤 4000 𝐤𝐬 နဲ့ ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတာပါ အ...
Bitcoin ; LiteCoin စုဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး App Game 👍 (Paypal ဖြင့်လဲ ဒေါ်လာ ;များစွာ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည် )
ဆော့ရတာလဲ အရမ်းလွယ်ပြီး mobile dataလဲသိပ်မကုန် 🥰
Minimum withdraw amountsနည်းတော့ ခဏလေးနဲ့ဆိုရင်ကို ထုတ်ရနေပြီ
နောက်ပြီး Givvy ကထွက်တဲ့ app တစ...
https://givvy-share.app.link/yWPLARMz1jb givvy-share.app.link Win together with Givvy; Be my friend; Join for money prizes;
https://t.me/BCH_ENJOY_BOT?start=Bot7392987 Telegram 𝗘𝗡𝗝𝗢𝗬 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗙𝗥𝗘𝗘 𝗕𝗜𝗧𝗖𝗢𝗜𝗡𝗖𝗔𝗦𝗛 1 BCH = 800;+
FREE BCH BOT ✅
✅Steps to ENJOY BCH
TO JOIN AIRDROP JOIN ALL CHANNELS AND DO REFERS ✅DONE✅
13 Окт 14:14
ETH coin အနေနဲ့ ဒီလင့်တွေ ထုတ်ရနေပါတယ်
1 ETH = ; 3498 တန်ပါတယ် ရသလောက်စုနိုင်အောင်ပါ
တခြားလင့်တွေကို ပြန်စမ်းသပ်ပြီးမှ ယခုလိုပြန်စုပေးပါမယ့်
ထုတ်မရတော့တာတွေပါရင် မိတ်ဆွေတို့ အချိန်ကုန်မှာဆိုးလို့ပါ
13 Окт 06:24
13 Окт 05:56